Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada S.Ogaadeenya ee Denmark oo ka qayb gashay shir ay qabatay safaarada Maraykanka ee Denmark.
Jaaliyada S.Ogaadeenya ee Denmark oo ka qayb gashay shir ay qabatay safaarada Maraykanka ee Denmark.
Jaaliyada S.Ogaadeenya ee Denmark oo ka qayb gashay shir ay qabatay safaarada Maraykanka ee Denmark. Safaarada maraykanka ee wadankan denmark ayaa u qabatay shir aad u balaadhan Caasimada sadexaad ee wadanka Denmark magaalada Odense. Shirkan oo loo qabatay dadka ajnabiga ah ee kasoo jeeda wadamada muslimiinta ah ee ku nool wadanka Denmark ayaa waxaa ka soo qaybgalay xubno ka socda jaaliyada somaalida ogadeenya ee wadanka denmark.
shirkaas oo ay hogaaminaysay safiirka dowlada maraykanka u fadhiya wadanka Denmark Ambassador Lauries S. Fulton ayna weheliyeen xubno ka howlgala safaarada ayay kaga hadashay sidii wada shaqayn buuxda ay u yeelan lahaayeen mujtaca muslimiinta ah ee ku nool wadanka Denmark qaybahiisa kala duwan & dowlada Denmark ama shacabka Densihka. Safiirada ayaa shirkaas si gooni gooni ah ula kulantay ururada hooyooyinka & ururada dhalinyarada.
Shirka ayaa waxaa si buuxda uga qayb galay jaaliyada Ogadenya ee Denmark & ururka Midowga Dhalinyarada & Ardayda Ogadenya(OYSU) faraciisa Denmark oo kamid ahaa qabanqaabiyayaasha shirka, Xubnihii shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa gabadh da,yar oo ree Ogadenya ah oo kasoo jeedisay khubad qiimo leh oo ay si kooban ugaga hadashay dhibaatada uu gumaysiga madoow ee itoobiya ku hayo shacabka Ogadenya. Wxayna jaaliyada Ogadenya noqotay jaaliyada kaliya ee shirkaasi ka hadashay. Sidoo kale jaaliyadu ayaa safiirada & xog-hayaheeda halkaas ku gudoonsiisay waraaqo ka hadlayay taariikhda Ogadenya & marxalada uu haatan ku sugan yahay shacabka & halganka Ogadenya.
Khudabadaas kadib ayaa waxaa mar kaliya is badalay jawigii uu shirku ku socday,iyadoo ay bilowdeen su’ aalo la weydiinayay safiirada iyo howl-wadenada safaarada oo la xidhiidha siyaasada dowlada Maraykanka ee aduunka, waxaa xusid mudan in suaalihii ugu adkaa ay weydiiyeen jaaliyada Ogadenya, ururka OYSU & xubin ka socday jaaliyada jamhuriyada Soomaaliya oo si aad ah ugu dhaliilay dowlada maraykanka & dowladaha ree galbeedka naas-nuujinta indho la’ aanta ah ee ay itoobiya naas nuujiyaan & sida taageeradooda loogu gumaado shucuubta ay itoobiya gumaysato sida shacabka Ogadenya,suaalihii la weydiiyey howl-wadeenada safaarada ayaa waxaa mid ahaa:
Waligiin ma maqasheen ama ma taqaanaan Ogaden,waxayna ku jawaabeen haa,kadibna waxaa la weydiiyey:in ay dhibaato ka jirto mala socotaan,waxayna ku jawaabeen haa,kadibna waxaa la weydiiyey:hadaba dhibaatadaas maxaad ka qabateen?
Shirkan oo ahaa kii koowaad ee ay safiiradu u qabato dadka ajaanibta ah ee ku nool Denmark tan & intii loosoo magac-aabay wadanka Denmark muddo labo sano laga joogo ayaa kusoo gabagaboobay jawi is afgarad,waxayna safiiradu u hambalyeysay jaaliyada & ururka dhalinyarada Ogadenya ee sida firfircoon ugu taagan ka midha dhalinta himilooyinkooda.